Ndụmọdụ iji rube isi n'iwu ọhụrụ banyere ịbanye n'ụlọ ọrụ | ECommerce ozi ọma
Ruo oge ụfọdụ nke nke banye na ọrụ ọ dịla ezigbo mkpa. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime usoro iji nwee ike ịchịkwa oge ọrụ, ugbu a emeela ka ọ bụrụ ihe dị mkpa iji zere ụfọdụ nsogbu. Nke nwere ike iduga n’inwekwu nrụgide.
Ọ bụ ezie na nke a nwekwara ihe ngwọta. You chọrọ ịmata ihe ndị kasị mma nhọrọ soro na iwu nke ịbanye na ọrụ? Enwere nhọrọ dị iche iche na imirikiti imirikiti, teknụzụ bụ nke na-emeri. Yabụ na nsuso onye ọrụ ahụ abụghị ihe mgbagwoju anya ịme. Ndị a bụ usoro kachasị mma ịgbaso!
1 Ngwanrọ kachasị mma iji jikwaa oge
2 Ngwa bụkwa ihe enyemaka ọzọ iji banye na ọrụ
3 Ihuenyo maka kaadị nyocha ma ọ bụ koodu
4 Technology na ọdịdị ihu
Ngwanrọ kachasị mma iji jikwaa oge
Otu n'ime nhọrọ mbụ anyị nwere bụ sọftụwia. Ọ bụ usoro ihe omume kọmputa nke ga-ahụ maka ịdebanye aha ntinye na ụzọ ọpụpụ nke ọrụ. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, kamakwa oge nkwụsịtụ ga-edechaa nke ọma. Ọ bụ ya mere enweghị ohere maka ụdị njehie ọ bụla. Gịnị bụ ihe kasị mma software?
Bizneo: Nhọrọ a dị maka ụdị ụlọ ọrụ niile. Nwere ike ịchọ onye ọrụ ọ bụla, jikwaa ihe ndekọ ahụ wee banye na ụdị ngwaọrụ dị iche iche dịka kọmputa ma ọ bụ ekwentị.
ProcessApp: Ọ bụ ọzọ nke dị mfe nhọrọ iji tụlee. Maka ndị ọrụ niile na-anọghị n'ọfịs mgbe niile, ọ nwekwara usoro geolocation. Ma, ọ bụ eziokwu na ọ na-arụ ọrụ karịrị ijikwa ndị niile na-arụ ọrụ ekwentị.
Nhazi PG: Na nke a, ị nwekwara ike ijikọ site na ngwaọrụ mkpanaka dị iche iche ma ị ga-etinyerịrị koodu ịbanye. Na mgbakwunye, egosiri na ị ga-enwe ike ịnweta ọkwa ọrụ na oge. Nke mere ya ngwa oru bara ezigbo uru.
Eziokwu: Ngwanrọ zuru oke iji chịkwaa oge nke awa arụ ọrụ. Yabụ, n'iji nkenke, enweghị mgbagwoju anya ma ọlị ịmata ihe ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ezumike, wdg.
Ngwa bụkwa ihe enyemaka ọzọ iji banye na ọrụ
Anyị ji n'aka na ekwentị nwere juputara na ya ngwa, n'ihi na na nke a, ọ ga-akara aka ịchịkwa schedules otú anyị nwere ike banye na ihe ndekọ niile na-anọgide. Site na nhọrọ a, nkasi obi ga-adịkwa na ndụ anyị, na-eme ihe n'ụzọ ziri ezi.
Ngwa TICTAC: una APP banye n'ime ime obodo. Ọ dị mma maka ndị ọrụ na-anaghị aga n'ọfịs na-arụ ọrụ. Ezigbo ihe ngwọta maka ọtụtụ ụlọ ọrụ eCommerce
Njikwa oru: N'ezie, ịbu aha a, ọ nweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ. Ngwa na mgbakwunye na inwe ike ịbanye na ya, nwekwara isiokwu ndị ọzọ dị ka ezumike na ọbụna ezumike ọrịa. Ntinye di nkpa ma di nfe ime.
Oge eruola: Na mgbakwunye na ilekwasị anya n'otu isi okwu ahụ dị ka ndị ọrụ ibe ha, na nke a, ngwa ahụ nwekwara njikwa nke ndị ọrụ ahụ niile ga-ahapụ ọnọdụ ha.
BeeboleỌ bụ ezie na iji ụgwọ kwa ọnwa, ọ ghọwokwa nhọrọ ọzọ iji nwee ike ijikwa ọrụ yana ibu ya ma ọ bụ nwee ike ịgbaso ezumike.
Enwere ọtụtụ ngwa ị nwere ike ibudata na nke ha na-enye gị ozi karịa ị nwere ike iche. Ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ, anyị nwere ozi ndị ọzọ mgbe niile iji chebara ndị ọrụ ọ bụla na oge ha na-arụ ọrụ echiche.
Ihuenyo maka kaadị nyocha ma ọ bụ koodu
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ afọ gara aga kaadị ahụ bụ otu n'ime usoro kachasị mma mmadụ ga-enwe ike ịbanye na ọrụ. Ma ka afọ na-aga n'ihu, teknụzụ adịghịkwa azụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbaso nkuzi ochie, mana emegharịrị ka ọ dị ugbu a, mgbe ahụ ihuenyo iji nyochaa kaadị ma ọ bụ koodu ha aghaghi ibu odibo. Nwere ike ịnwe koodu a na ekwentị gị ma ị ga - ewetara ya nso na ihuenyo. N'ụzọ dị otú a, a ga-achịkọta ihe niile na nchekwa data na oge awa na ọrụ a ga-arụ ga-eru ya.
Technology na ọdịdị ihu
Ọ bụ eziokwu na ọ na-achọkarị ịkwụsị n'ihu na nke a, ọ gaghị adị obere. Ya mere, ude usoro nwekwara ike ịbụ otu n'ime ndị kasị mma omume maka ubé ibu ụlọ ọrụ. Iji mee nke a, onye nchoputa nke ihu ma ọ bụ akara aka mkpisi aka. Nke ga - edukwa ụlọ ọrụ mara maka nhazi oge agbadoro na ihe niile metụtara profaịlụ nke onye ọrụ. Nhọrọ anaghị enwe ụkọ ma yabụ, n'elu ụlọ nke ịbanye na ọrụ, ma. Kedu ihe ị chere kachasị mma iji nwee ike ịgbaso iwu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Atụmatụ iji rube isi n'iwu ọhụrụ nke ịbanye na ọrụ